Maitiro ekuisa Easy Easy Ratidza - Nyore Multi Ratidza
Maitiro ekuisa nyore Easy Multi Display
Yakagadzirwa Pa 19 / 10 / 2019
Kana iwe uchida kuziva maitiro ekuisa Nyore Multi Ratidza tevera iyi mirairo kuti utange neEasy Multi Display ...
Cherechedza: Kuisa uye kuvhura Easy Multi Display iwe unotanga kuda kurodha software. Kuti uwane mirayiridzo yekukopa software, ona chinyorwa chekutsigira chine musoro Nzira yekuDhaunirodha EMD Mukutanga.
MuWindows, vhura iyo windows Explorer hwindo uye wobva waenda kune yakadhindwa faira.
Dzvanya kaviri pane iyo EMDSetup.exe faira kutanga iyo yekuisa.
Windows icharatidza kukurumidza kubvunza iwe: "Iwe unoda kubvumira iyi programu kuchinja shanduko yako?" Dzvanya Ehe.
Iwindo rekuisa rinobva raonekwa. Sarudza yako yaunoda yekuisa nzvimbo. Tinokurudzira kusiya nzvimbo yekumira. Dzvanya Zvadaro.
Sarudza Kutanga Menyu Folder nzvimbo yechirongwa kuisa. Isu tinokurudzira kusiya izvi seyakagadzika mamiriro, wobva wadzvanya Zvadaro.
Wongorora iyo Yekuisa nzvimbo uye Kutanga Menyu Folda, wobva wadzvanya Isa. Ratidza Rakawanda Multi richatanga kuiswa.
Iwindo idzva richaonekwa, richikukumbira kuti usarudze mutauro wekuisa VLC Media Player. Sarudza mutauro wako wobva wadzvanya OK
VLC Media Player Setup ichatanga kuvhura. Dzvanya Zvadaro.
Click Next kubvumirana kune Chibvumirano cheLayisensi.
Siya zvigadziriso zvezvikamu uye wobva wadzvanya Zvadaro.
Sarudza nzvimbo yekuisa yeVLC Media Player, wobva wadzvanya Isa.
Mirira kuti kuiswa kwacho kupedzise, ​​wobva wadzvanya Pedza.
Wobva wadzokera kune Nyore Multi Ratidza Setup Wizard uye tinya Pedza.
Iwe ikozvino wabudirira kuisa Easy Multi Display!
Ndeipi imwe sarudzo kana vatengesi vezvitoro vapererwa nedhijitari yekushambadzira?
6 matipi ekuti utangezve bhizinesi rako mushure mehosha uchishandisa mhinduro yemadhijitari.
Kuwana zvimwe kubva muchitoro